Etu esi edo ibe akwukwo ma guo ha ma emesia | Martech Zone
Fraịde, Septemba 30, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Ugbu a ụlọ ọrụ ọ bụla nọ n'ụwa bụ onye mbipụta akwụkwọ, oke ọdịnaya dị ebe ahụ dị ka ọ na-amụba na ọnụego na-enweghị atụ. Maka ndị na-ere ahịa, ọnụọgụ nke ozi na ọsọ nke ozi na-agba ọsọ. (Achọrọ m ka àgwà ahụ na-aga ngwa ngwa, kwa!). Ka o sina dị, mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ otu n’ime obere ngwa ọrụ ndị ahụ dị jụụ nke na-eme ka ndụ gị dịtụ mfe. Achọtara m nke a n'ezie mgbe m na-enyocha nke anyị nchịkọta na ịchọpụta isi mmalite. Achọpụtara m readitlater.com n'ime ebe ahụ!
Gụchaa ya bụ ihe nchọgharị na ihe nchọgharị maka itinye aka na ntanetị nke na - enye gị ohere ịka akara ma chekwaa ihe - wee gụọ ma emechaa site na ngwaọrụ gị ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ onye njem, nke a bụ ngwa ọrụ dị egwu n'ihi na ị nwere ike ịgụ ọdịnaya ahụ na offline! Gụọ ya ka emechara ka ejiri ihe karịrị 266 ngwa gafee ọtụtụ nyiwe ị nwere ike iji.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ Chrome, ịnwere ike ịgbakwunye Mgbatị Postponer na mfe tag ibe edokwubara ozugbo na ihe nchọgharị ahụ!
Ya mere,… onye n'ime unu smart ọgụgụ na-agụ ọrụ a? Daalụ!